Ganacsade Soomaali Ah Oo Xaaskiisa Ay Ku Dishay Dalka Koonfu... » Axadle Wararka Maanta
Ganacsade Soomaali ah oo xaaskiisa ay ku dishay dalka Koonfu…
Cape Town (Axadle ) – Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dil xalay ganacsade Soomaali ahaa loogu geystay xaafaddda Mayfair oo ka tursana magaalada Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika oo Soomaali badan ay nooshahay.
Haweeneyda dilka ka dambeysay oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay dilka u adeegsatay bastoolad uu lahaa marxuumka, kadibna ay wacday Booliiska oo ay ugu dambeyn isku dhiibtay.
Laamaha ammaanka ee Koonfur Afrika ayaa haatan wada baaritaano dheeraad ah oo ku aadan sababta ka dambeysay dilka ay haweeneydaasi u geystay saygeeda.
Dhacdadan ayaa la-yaab ugu noqtay Soomaalida kale oo si aad ah u hadal haya dilka loo geystay marxuum Cabdikariin Gigis oo ka mid ahaa dhalinyarada ku nool Johannesburg.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa dalka Koonfur Afrika kusoo badaneyey weerarada ka dhanka ah Soomaalida ku dhaqan dalkaasi oo la kulma dil, dhaawac, dhac hantiyee.
Inta badan kooxo burcad Afrikaan ah ayaa ka dambeeya weerarada lagu hayo Soomaalida, waxaana aad u yar wax ka qabashada dowladda dalkaasi ee ku aadan dhibaatooyinkaasi